Inkulumo ethi "itshe legumbi" cishe lizwile abaningi, kodwa abaningi bayaqonda ukuthi liyini. Ngokusobala, kukhona into eyodwa kuphela: akuyona into engokwenyama, kunalokho imifanekiso, engenayo igobolondo elingokwenyama, kodwa ngesikhathi esifanayo inencazelo ejulile. Ake sizame futhi sithole ukuthi yiluphi uhlobo lwamatshe lokhu futhi ukuthi livelaphi.
Lapho le nkulumo ibonakala kuqala
Ngokuvamile, lapho bethi "itshe legumbi", lizwakala ngandlela-thile lingaqondakali futhi njengokungathi ngaphandle kwesisekelo, kungabi yinto ethize. Akekho owazi kahle ukuthi leli gama lizwakala nini okokuqala, kodwa kunezizathu zonke zokukholelwa ukuthi lokhu kwenzeke ekuqaleni kwentuthuko yabantu.
Kunombono ongenangqondo ukuthi wawuzwakala isikhathi eside ngaphambi kokusungulwa kwezinhlobo zokuqala, ezilula kakhulu zokubhala, futhi inkulungwane yeminyaka yadluliselwa emlonyeni kuya emlonyeni kuze kube yilapho ekugcineni ibhalwe phansi.
Kunzima ukukusho ukuthi, njengoba seyiphendulelwe ifomu elibhalwe phansi, ingabe yashintsha incazelo yezwi esivela kuyo kusukela ekuqaleni? Futhi ngokuvamile, ebonakala ezikhathini zasendulo ingqondo ebalulekile, ingabe inkulumo ethi "itshe legumbi" lisho okungenani inani elilinganiselwe? Ngokungangabazeki!
Izinkomba zomlomo nezemibhalo: I-Torah neTestamente Elidala
Manje sekuyaziwa ukuthi ngisho nangaphambi kokubhalwa kweTorah futhi, mhlawumbe isikhathi eside ngaphambi kokuphela, amaJuda asebenzisa kabanzi le nkulumo ngomkhuba womlomo. Wasebenzelana nomlando, okwakuboniswa kamuva eTorah, futhi kamuva encwadini engcwele yezinkolo zomhlaba ezimbili, ubuJuda nobuKristu - iTestamente Elidala.
Kwashiwo kulo mayelana nokudalwa kwezwe nakho konke, futhi konke kwaqala ngetshe eliSimandla elilahliwe, elibhapathiziwe olwandle olwalubusa eduze kweCosos. Ukukhulumisana ngokweqile emkhathini, ngenhla eyaba yiNtaba iMoria, leli tshe laliyindawo eyodwa kuphela lapho kuzalwa khona ukuphila.
Ngakho-ke, kuvela ukuthi leli gumbi lesisekelo liyisisekelo somhlaba wonke lapho konke kumile khona futhi konke okuvela khona, ngaleso sikhathi ngaphandle kokudalwa kwendalo okungenakwenzeka.
Ukuthola isiqalo esingokomoya: IBhayibheli
Uma siphendukela eBhayibhelini, okuvame ukubhekwa kuyo, ezwakala umqondo wegama legumbi, sithola incazelo ehlukile yale nkulumo. Lokhu kubhekisela emfanekisweni wabakhi abangenandaba nabakha isakhiwo futhi babeka izisekelo zegwala elikhulu, elifihlekile ngaphambili emhlabeni. Ukunquma ukuthi uzophazamisa umsebenzi wabo, abakwa-masons bachitha isikhathi esiningi nemizamo ekutholeni leli dwala baphume emhlabathini bese belikhipha endaweni yesakhiwo. Kodwa lapho bekwenzile, kwathiwa leli tshe, elilodwa kuphela esifundeni sonke lifanele yonke imingcele yesisekelo sendlu. Futhi ngaphezu kwalokho, ekuqaleni wayekhona ngqo endaweni lapho i-angle yesakhiwo esizayo isichazwe khona.
Inkulumo ethi "itshe legumbi" lisho ukuthini ? Incazelo ye-phraseology, ngezwi elichazwe, "yisisekelo." Kusho ukuthi konke kuhlale kusendaweni yayo, noma kunjalo, incazelo isho nakakhulu lapha.
Abanye bathi akukho lutho olungcwele kule nkulumo, futhi leli gumbi lesisekelo liyilokho elikushoyo. Okusho ukuthi, itshe elibekwe phansi kwesakhiwo sonke.
Kusukela ezikhathini zasendulo, abakhi babeyazi ukuthi itshe elikhulu futhi eliqinile elibekwe ekhoneni lendlu yangaphansi yinto eyinhloko yesakhiwo sonke, ngoba isekela sonke isakhiwo, sithwala. Le nqubo yayisetshenziswa yibo bonke abadwebi basendulo kusukela lapho kwakhiwa amaphiramidi amakhulu, kanye nabakhi bamaGreki nabaseRoma abakha izakhiwo ezinhle ezisekhona kuze kube yilolu suku.
Futhi manje akukho lutho olushintshile kule ndaba, futhi lapho ukwakha, njengangaphambili, ekhoneni lesisekelo kwabeka izakhiwo ezinkulu zokwakha. Njengencazelo engokomfanekiso, lapha leli gumbi lesisekelo liyisisekelo sezinto zonke, konke kuvela kulo futhi lihlala kulo, hhayi kuphela ekufanekiseni, kodwa ngomqondo oqondile.
Umthombo oyinhloko ngokomqondo wangempela nangokomfanekiso
Ngokuba inkulumo ethi "itshe legumbi," incazelo yenkulumo ingaba eyodwa kuphela - isisekelo, futhi kungakhathaliseki ukuthi yini: indawo yonke, ukholo, isitayela sokwakha - lokhu akuyona into esemqoka kakade.
Kuzwakala sengathi le nkulumo isebenza njalo ezimweni ezahlukene ngezindlela ezahlukene, kepha njalo leli tshe alikho isisekelo somzimba, kodwa ngokuqinisekile kukhona incazelo ethile kule nkulumo.
Kwezinye izimo, lawa magama asetshenzisiwe amafilosofi angajulile angaphansi noma into engakwazi ukuchazwa ngamazwi avamile.
Manje leli gumbi lesisekelo liyisisekelo esiyisisekelo, imithethonqubo, izinkolelo, izinkomba ezindaweni eziningi zesayensi, isibonelo, itshe elinjalo libizwa ngokuthi i-periodic table kanye nokuningi okuningi. Kodwa okubaluleke kakhulu, kusukela ngesikhathi lapho leli gama lizwa kuqala, futhi kuze kube namuhla lihlala lifanelekile, nakuba abaningi bengaliqondi incazelo yalo.
Indlela yokufunda ukuqonda isiNgisi ngezindlebe - izincomo ezisebenzayo, imithetho kanye nempendulo
Indlela yokusebenzisa isenzo sokuba isiNgisi
Amagama ase-Old Slavic. Ulimi oludala lwesi-Slavic. Incwadi endala yesi-Slavic
Shershni Reservoir Incazelo, iholide, izithombe
Alou Diarra - kamuva isibonisi ithalente
Uyini USD? iyunithi Ezivamile - kungcono ...
Roto-virus ukutheleleka: ukwelashwa, izimpawu, ukuthi lesi sifo idluliselwa
Njengoba Merlin Monro wafa, nokuthi kungani, unyaka, bangaki iminyaka?
Iphethini "Knot kaSolomoni" hook: nice elula
Endovascular Ukuhlinzwa: Izinhlobo ukungenelela
Indlela ukuthatha ngesikweletu?